TETIANDRO :: Mitaky fepetra feno momba ny datim-pifidianana ny governemanta • AoRaha
TETIANDRO Mitaky fepetra feno momba ny datim-pifidianana ny governemanta
Miandry. Nisongadina nandritra ny tafatafa tamin’ny mpanao gazety nataon’ny Prai- minisitra, Ntsay Christian, teny amin’ny lapan’i Mahazoarivo, omaly, ny fanambarany fa tsy mbola feno tanteraka ireo fepetra hahafahana miroso amin’ny fifidianana ao anatin’ny fotoana fohy. Nolazainy fa « miroso ny toe-draharaha saingy tsy maintsy mbola dinihina avokoa ireo toe-draraharaha samihafa iankinan’ny fanatontosana izany, araka ny tetiandro naroson’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni). Tsy maintsy dinihina lalina izany sao hiteraka krizy vaovao indray ».
Voaresaka manokana ho isan’ny olana mety tsy hahafahan’ny governemanta mamoaka ny datim- pifidianana, ny momba ny lafiny vola. Voalaza fa tafakatra hatrany amin’ny 56 000 tapitrisa ariary ny vola ilain’ny Ceni hanatontosana ny fifidianana filoham-pirenena. «Taorian’ ny didy navoakan’ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana (Hcc) dia betsaka ireo toe-javatra niova ka nahatonga an’ izany fiakaran’ny tetibola ilaina izany », hoy ny filoha lefitry ny Ceni, Thierry Rakotonarivo .
«Eo ihany koa anefa ny lafiny tsy fandriampaha lemana », hoy ihany ny Praiminisitra, Ntsay Christian.
Niaiky izy fa andraikitra lehibe tsy maintsy hiantsorohan’ny governemantan’ny marimaritra iraisana ny fiantohana ny fifidianana mangaharaha sy madio, handraisan’ny rehetra anjara ary eken’ny rehetra. « Tsy maintsy hisy ny fifanakalozan-kevitra manodidina izany ary tsy maintsy arahina koa ny didin’ny Hcc », hoy ihany ny Lehiben’ny governemanta. Tsy mbola ho ato ho ato mihitsy izany no hamoahan’ny governemanta ny tetiandrom-pifidianana mifanaraka amin’ny soson-kevitry ny Ceni. Ny alatsinainy teo no fantatra fa efa nanoloran’ ireo mpikambana eo anivon’ity rafitra misahana ny fifidianana ity an’io tetiandro io.
Araka ny fantatra dia daty roa, na amin’ny faran’ny volana oktobra na amin’ny fiandohan’ny volana novambra amin’ity taona 2018 ity no heverin’ ireo mpikambana eo anivon’ny Ceni fa tokony hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany.
KITRA – MONDIAL 2018 :: Tafita amin’ny ampahavalon-dalana ny Frantsay